Par Taratra sur 12/12/2019
Voasambotry ny polisy tetsy Ambohijtovo, ny alatsinainy teo ny lehilahy iray noho ny resaka fivadiham-pitokisana. Voalaza ho tsy nandoa ny vidina vy sy simenitra mitentina 33 Tapitrisa Ar izay nalainy tamina vehivavy iray izy. Nambaran’ny loharanom-baovao fa dify anefa ny fetran’andro tokony handoavany ny vola izay tamin’ny faha-25 janoary lasa teo. Mbola tsy naloahany anefa izany ary narirarirany ilay vehivavy. Vokany, nametra-pitoriana ilay voafitaka ny faha-14 novambra teo ka sarona ralehilahy rehefa nokarohina.
Rongony milanja 09 kilao no sarona tamina lehilahy roa teny Anosivavaka-Ambohimanarina, ny talata lasa teo. Fantatra fa amidin’izy ireo 1500Ar ny fonosana rongony iray ary 10.000Ar ny iray sachet. Nambaran’n polisy sampana miady amin’ny zava-mahadomelina fa mbola nahitana fonosana rongony miisa 140 sy rarany 06 kilao tao amin’ilay trano nandritra ny fisavana.
Zaza menavava tokony ho 7 volana teo no hita nisy nanary teny amin’ny reniranon’i Mangarahara-Mandritsara, omaly manodidina ny tamin’ny 07 ora maraina. Ireo mpanasa lamba teny an-toerana no nahita azy ka niantso avy hatrany ny mpitandro filaminana teny an-toerana.